श्रीमती लाई बि’ग्रन नदिन ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु ( प्रदेशी मित्रहरुले अबस्य पढ्नुहोस ) – Sanjal Nepal
Homeरोचकश्रीमती लाई बि’ग्रन नदिन ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु ( प्रदेशी मित्रहरुले अबस्य पढ्नुहोस )
November 30, 2020 admin रोचक 4310
प्राय आफ्नै लापर’बाही र धेरै बिश्वास दिनुले गर्दा हुने गरेको एक श्रीमति पी’डितहरुको भनाइ र उनीहरुको अनुभवले देखाएको छ । आखिर के कारणले हो त । बिदेशमा गएका पुरुष हरुको प्राय घर बि’ग्रिनु ।यसको मतलव यो होइन की विदेशमा गएका सबैका श्रीमति नेपालमा बि’ग्रिएका छन् । दिनहुँजसो आइरहेका समाचारहरु हेर्दा ग’लत बाटो अपनाउने श्रीमतिका श्रीमान कि त वैदेशिक रोजगारीमा हुन्छन् या त उनीभन्दा टाढा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै आफ्नो श्रीमतिलाई सहीबाटोमा लगाउन बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । त्यसका लागि यी उपाय अपानाउँदा राम्रो हुन्छ ।
श्रीमिति लाई कत्ति पनि फ्री नछोड्नुहोस् श्रीमतीका हरेक भनाइमा च’नाखो रहनुहोस् । उनलाई व्यस्त राख्नुहोस् किनकी उनले नानाथरी कुरा दिमागमा आउने अवस्था नबनाउनुहोस् । उनि के गर्दै छिन् ,कहाँ जादै छिन् किन जादै छिन् , हरेक कुरो को जानकारी लिने गर्नुपर्छ । धेरै माया गर्छु भन्दैमा धेरै विश्वास गर्नु राम्रो हुँदैन ।घरमा एक्लै नछाड्नुहोस् आफू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने श्रीमतिलाई घरपरिवारसंगै राख्नुहोस् । सक्नुहुन्छ गाउँमै लगेर राख्नुहोस् । आमा बाबुसंग, शहर केन्द्रित ठाउँमा एक्लै नछाड्नुहोस् । यदी शहरमा राख्नै पर्ने बा’ध्यता भए उनीप्रति च’नाखो बन्नुहोस् । उनको बारेमा जानकारी लिने माध्याम बनाएरै जानुहोस् ।
अर्को तपाईको फोनको श्रीमतिले कस्तो रेस्पोन्स गर्छिन् त्यस प्रति पनि तपाई सचेत हुनुपर्छ । तपाईले फोन गर्र्दा कस्तो तरिकाले बोल्नु हुन्छ ? ठा’डो पाराले या सामान्य तरिकाले ? या बोल्दा बोल्दै रि’साएर फोन का’ट्नु हुन्छ ? जब श्रमती हरु बोल्दा बोल्दै ए’कासी झ’र्किने ,रिसा’उने गर्छन भने शं’का गर्नैपर्छ । असल श्रमती हुन् भने तपाई जे जस्तो भन्नुस बिदेस को फोन ,आफ्नो श्रीमानको फोन आउदा खुसि नै हुनु पर्छ ।यदी सामान्य कुरो मै फोन काट्ने झ’र्किने गरिन भने सम्झनुस कुनै च’क्कर चल्दै छ जहाँ अब तपाई को फोन नआउदा पनि कुनै फरक नपर्ने अवस्था भैसकेको छ । घरमा पैसाको कारोबार कसले गर्छ । श्रीमती या बाबा आमाले । या जति भए पनि श्रीमतीको नाम मा पठाउनु हुन्छ र कुनै हिसाब र जानकारी लिनु भएको छैन । यी प्रश्नमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ ।
बिदेशमा गएका पुरुष हरुको प्राय घर बि’ग्रिनु ।यसको मतलव यो होइन की विदेशमा गएका सबैका श्रीमति नेपालमा बि’ग्रिएका छन् ।श्रीमती हो अर्काको घरबाट मलाई नै भनेर आई, यसको अब म बाहेक अरु कोही छैन भनेर कहिल्य भावनामा नबग्नुहोस् । बरु तपाई एकपटक आफ्नो दुःखको कमाइलाई सोच्नुहोस् । मैले कमाएको पैसा यसै उडेको त छैन कतै त्यसैले श्रीमतिलाई अ’भावमा बाँ’च्न सिकाउनुहोस् । अभाव भन्दैमा सारो क’ष्ट भने दिनुहुँदै । धेरै माया गरेर सबै पैसा श्रीमतिलाई नै पठाउनुहुन्छ त्यसको हिसाब किताब केही राख्नुहुन्न माग्नुहुन्न भने सोच्नुहोस् तपाईको लगानी बालुवामा पानी अवश्य हुन्छ ।
अर्को चनाखो हुनुपर्ने प्रश्न हो श्रीमती कतिको चु’लबुले छिन् कुनै जागिर गर्नु हुन्छ या जागिर गर्ने ब’हाना गर्दै छिन् । श्रीमती चु’लबुले छिन् भने अलि ख्याल गर्नु होस् , किन कि महिला हरु जति चु लबुले हुन्छन । उतिनै यौ’न प्या’सी पनि हुन्छन् , कुनै जागिर गर्नु भएको छ या छैन । कस्तो खाल्को जागिर हो , जानकारी लिनुहोस् , यहाँ यस्तो पनि देखिनमा आएको छ श्रीमती जागिरमा जाने भन्ने उल्टो आफ्नो पैसो खर्च हुने । यो अवस्था घरबार बि’ग्रिएको अवस्था हो ।किन कि जब अनेक थरि ब’हाना गरि श्रीमती बाहिरिन खोज्दैछिन् भने अब तपाइँ आफै बुज्नु पर्ने कुरो हो, तपाई बिदेश हुँदा हुँदै यस्तो ब’हाना गर्छिन भने , त्यहाँ कुनै ठूलो योजना बनि सकेको हुनुपर्छ । सबै जागीरमा जाने श्रीमतिमा यो कुरा लागू नभए पनि यस्ता विषयमा च’नाखो चाही अवश्य हुनुपर्छ । यसका लागि कहिले काँही जागीर गर्दैछन् भने अब जागिर नगर मेरै कमाईले पुगिहाल्छ नी । भनेर उनको मनको कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नु उत्तम मानिन्छ । अर्को कुरा तपाई विदेशमा गइसकेपछि बेला बेलामा श्रीमतीको मोबाइमा फोन गर्दै गर्नुपर्छ ।
तपाईलाई थाहै नहुने अर्को नम्बर पो चलाएको छ की यी सबैकुरा ख्याल गर्नुपर्छ । अहिले को अवस्थामा सबै भन्दा बि’कृति मोबाइल र सामाजिक संजाल मार्फत भएको छ ।श्रीमती को मोबाइल धेरै बिजी हुनु र विशेष गरि साँझ र रात को समय मा बिजी हुनु भनेको पनि ख’तरा नै हो । यस विषयमा घरमा भएका छोराछोरी वा अरु कुनै माध्यामबाट जानकार रहनुहोस् । कुनै समयमा बुढोको कमाइमा रजाइ गर्न प’ल्कीसकेको अवस्था पनि हुन सक्छ ।यस्तो अवस्था आउन नदिन तपाई संगै भएको बेलाका उनको मोबाइलमा मिस कल, रिसिभ कल, म्यासेज, डाइल नम्बर बारम्बार हेर्दै गर्नुपर्छ । यसले पारिवारिक क’हल आउला भनेर कत्ति पनि नडाराउनुहोस् । किनकी श्रीमान श्रमतिको झ’गडा परालको आ’गो यस्सै भनिएको होइन । एक छिन झ’गडा भए पनि पुन मिलन भइहाल्छ । यदि श्रीमति असल बाटोमा छिन भने अवस्य पनि झ’गडा पर्दैन ।
यदी यही विषयमा पनि झग’डा हुन थाल्यो भने केही त ग’डबढी अवस्य छ भनेर चनाखो भने हुनैपर्छ । यदी बेला बेलामा आफन्त बाहेकका नम्बरबाट मिस कल आउने, म्यासेज आउने गरको छ भने पछि घरबार वि’र्गिन यसै छ त्यहीबेला नै बि’गारे भैगो नी होइन र त्यसैले जति सकिन्छ श्रीमतीलाई क’न्ट्रोल बनाउनुपर्छ ।बे’लगामको घोडा बन्न दिनुहुन्न ।यो सबैमा महिलामा लागू नहुने भए पनि पछिल्लो केही यस्तो घ’टना घ’टेका छन् । जुन तपाई हामीले सामाचारमा सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । त्यसैले आफू स’चेत भइयो भने वैदेशिक रोजगारीमा मात्र होइन विश्वको कुनै पनि कुनामा गए पनि तपाईले आफ्नो घर परिवार सुमधुर बनाउन सक्नुहुन्छ । सफल खबर बाट ।
झण्डै डेढ करोडले हेरिसकेको भिडियोमा यि युवतीले के गर्दैछिन ?
कसरी लि’क भयो अरबीको भिडियो जहाँ चेलिहरु यस्तो काम ग,र्दै
April 2, 2021 admin रोचक 10050
काठमाडौंको ढलमा कोरोनाको जिवाणु देखिनुले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको संकेत गर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले बताएका छन् । आइतवारमात्र काठमाडौंमा २७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । त्यस्तै ललितपुरमा दुई र भक्तपुरमा एक जनामा कोरोना देखियो।पछिल्लो केही
जाडो महिनामा एक्लै रात काट्न गाह्रो छ!
November 26, 2020 admin रोचक 5465
तपाईको कुनैपनि सम्बन्धलाई दिगो र सफल बनाउँन सबैभन्दा पहिले तपाईमा बिश्वास हुनु पर्दछ । सधै सकारात्मक सोच पनि हुनु पर्दछ । तरपनि यहाँ दैनिक लाखौं सम्बन्धमा बिभिन्न समस्याहरु आइरहेका छन् । कहि न कही चुकिरहेका
अभिनेत्री पायलको बयान: फिल्म निर्माताले पाइन्टको जीप खो’ल्यो, मेरो सबै खो’ल्यो अनि…
December 13, 2020 admin रोचक 6439
काठमाडौं। चर्चित चलचित्र निर्माता एवं निर्देशकमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ। बलिउडमा चलिरहेको हरेक बहसमा सक्रिय रुपमा भाग लिने फिल्म निर्माता एवं निर्देशक अनुराग कश्यपमाथि अभिनेत्री पायल घोषले ग’म्भीर आ’रोप लगाएकी छिन्। तेलुगु न्युज च्यानललाई दिएको
LEX 18 agenda conversation: Job club (541114)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (511638)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (131036)